INDLU EFINCA LAS JARAS. MONTES DE TOLEDO
Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguMiguel
Kwiinduli zeMontes de Toledo, iimbono ezimangalisayo. Uza kuyithanda indawo yam ngenxa yemibono, indalo, indlu, ifama. Indawo yam yokuhlala ilungele izibini, abantu abathandanayo, iintsapho (ezinabantwana), kunye nezilwanyana zasekhaya.
I-30,000 m2 ye-oki ye-holm, i-rockrose, i-pines, i-broom, i-lavender, kunye nezityalo zendalo, ezikhathalelwe ngononophelo, ngelixa zisenayo isiseko se-scrubland. Asizange sifune ukuyivumela ukuba ilahlekelwe livumba layo kunye nendalo, njengesiqalo seMontes de Toledo. Indawo efanelekileyo yokuphumla kunye nokuqhawulwa, ifama ekwanti, kodwa imizuzu engama-75 ukusuka eMadrid, imizuzu engama-25 ukusuka eToledo. Ukufika kuyo kufuneka sinandiphe umkhondo wehlathi malunga nemizuzu eyi-10 ngemoto, ukungcola, igcinwe ikwimeko entle.
Indlu, ehlanganiswe ngokugqibeleleyo phezulu kwifama, kodwa ngaphandle kokufuna ukuphula i-aesthetics ye-scrub, yakhiwe ngokungathi yifestile enkulu, ekubeni iimbono ezivela kwindlu ngokungangabazeki zingcono kakhulu esinokuzinikezela.
Igumbi lokuhlala-ikhitshi le-60 m2 elijonge ifama kunye neMontes de Toledo. Igumbi lokuhlala elineesofa ezi-3 ezinezihlalo ezi-3. Itafile ye-oki eqinile eyongezelelwayo kubantu abasi-8. Itshimini ekwaziyo ukufudumeza yomibini imigangatho. Ikhitshi yeSiqithi idityaniswe kwigumbi lokuhlala elinesitovu seceramic, izitya zabantu abayi-15 kunye nomatshini wokuhlamba izitya. Ikhitshi legumbi elincedisayo, ifriji, i-cellar encinci.
-1 amagumbi okulala amabini. Inqanaba eliphantsi.
-Igumbi lokulala elineebhedi ezi-2 (abantwana aba-4). Inqanaba eliphantsi.
-1 amagumbi okulala amabini. Umgangatho ophezulu. (+ Umatrasi owongezelelweyo)
-1 Bedroom 2 Iibhedi. Umgangatho ophezulu.
-1 igumbi lokuhlambela elineshawari phantsi.
-1 igumbi lokuhlambela elineshawa phezulu.
Ifama inikezela, ukongeza kwindlela yayo yeflora kunye nomjikelezo, umnyango weMontes de Toledo. Ukusuka apho singonwabela ukugquma ngexesha lokukhwelana kwezilwanyana zale ndawo, ukucamngca ngekhulu lekhulu leminyaka le-oki le-Holm, iindlela zebhayisekile, ukunyuka intaba, njl. Ecaleni kwefama sinomlambo waseGuajaraz, onemithi ebanzi, neentaka ezidla inyama esinokusoloko sizinandipha.
Yifama ebiyelwe ngokupheleleyo enamasango amabini, elinye lisezantsi kwaye elinye lingasentla, apho unokonwabela i-barbecue yangaphandle kunye ne-oveni yokhuni.
Ukusetyenziswa kwe-barbecue kuxhomekeke kwizithintelo zengingqi malunga nokuthintela imililo yehlathi (ngokuqhelekileyo inqatshelwe ukusuka ngoJuni ukuya kuSeptemba), ngokuzenzekelayo sishiya iindwendwe zethu i-barbecue yegesi.
Indlu esandula ukwakhiwa, yonke ifanitshala kwakunye noomatrasi zikumgangatho oncomekayo kakhulu kwaye azisetyenziswa kakhulu.
4.80 · Izimvo eziyi-110
Sihlala kwiiMontes de Toledo. Imizuzu embalwa ukusuka eMazarambroz naseSonseca. Unokundwendwela isixeko esiyimbali saseToledo, iNdawo yeLifa leHlabathi, ekwiikhilomitha ezimbalwa ukusuka apho.
Ngokuphathelele ixesha lokungena / lokuphuma, sibhetyebhetye, ngaphandle kokuba kukho ukungena / ukuphuma kwezinye iindwendwe ngaloo mini. Kwezi meko: Isuka phambi kwentsimbi ye-12:00 ize ingene emva kwe-17:00